Google Chrome ho an'ny iOS izao dia loharano misokatra | Vaovao IPhone
Google Chrome ho an'ny iOS izao no loharano misokatra
Google Chrome dia nanjary mpitety tranonkala be mpampiasa indrindra eo amin'ny tontolon'ny birao, mandray anjaran-tsena betsaka amin'ny Internet Explorer / Microsoft Edge sy Safari. Ao amin'ny tsenan'ny telefaona, tsy misy angona hanamafisana na handavana raha ambony noho ny Safari ny fampiasana Chrome amin'ny iOS, saingy noho ny fampidirana azy amin'ny ekôzista Safari natiora, Ny browser an'ny Apple dia miasa kokoa noho ny Chrome options. Ireo tovolahy ao amin'ny Google dia manavao hatrany isam-bolana amin'ny fampidirana endri-javatra vaovao amin'ny endriny ho an'ny birao sy ho an'ny finday avo lenta.
Ny vaovao farany mifandraika amin'ny browser Chrome dia ny namoahan'i Google azy, nanampy ny kaody ao amin'ny kitapom-bolan'ny tetikasa Chromium, mba hahafahan'ny mpampiasa manova azy io sy mamorona ny kinova azy manokana. Araka ny bilaogin'i Google, ny kaody Chrome ho an'ny iOS dia nitazona ny sisa tamin'ny tetikasa Chromium noho ny fahasarotana takian'ny sehatra finday an'i Apple, satria mitaky izany ny orinasa monina ao Cupertino ny mpanamory rehetra dia noforonina eo ambonin'ny motera fandikana WebKit ary amin'ny tranga Chrome koa miaraka amin'i Blink, izay fahasarotana fanampiny izay tian'izy ireo hialana alohan'ny hamoahana ilay kaody.
Ny fampiasana motera roa dia nanasarotra ny fanoloran-tenan'i Chrome hanokatra loharano, saingy afaka taona maromaro, ireo mpamorona mampiasa ny kaody dia afaka manangona ny kinova iOS miaraka amin'ny kinova Chromium hafa. Ity dia mandeha ao amin'ny Google azo antoka dia hidika ho hetsika lehibe eo amin'ny fampiharana izay tsy ho ela dia ho tonga ao amin'ny App Store amin'ny endrika navigateur ankoatry ny fampiharana, toy ny fitantanana mail, izay misy koa ny navigateur integrated, izay azo hatsaraina tsara amin'ny alàlan'ny fampiasana ilay kaody navoakan'i Google avy amin'ny Chrome ho an'ny iOS.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Google Chrome ho an'ny iOS izao no loharano misokatra
Loharano misokatra fa misy singa mihidy ... ny chromium dia tsy toy ny taloha
Ignacio Sala dia hoy izy:
Mampalahelo fa tsy afaka manana ny zava-drehetra ianao.
Snapseed dia nohavaozina ho an'ny iOS manampy fitaovana vaovao: curves
Apple indray mamaky ny firaketana azy manokana: iPhone 78,3 tapitrisa amidy